Ukugcwaliseka kwe-IDS: Izindlu zokugcina izinto eziguqukayo nezinsizakalo zokugcwaliseka | Martech Zone
NgoMsombuluko, Juni 8, 2015 NgeSonto, uDisemba 24, i-2017 Douglas Karr
Eminyakeni embalwa edlule, ngithole ukuvakasha kwe- Indawo ye-IDS lapha eMidwest. Kwangivula iso impela ngoba angikaze ngibone intuthuko eyenzekile ezimbonini zezimpahla, zokugcina impahla nezokufeza. Ngokushesha kulo nyaka futhi ngibe nengxoxo emangazayo nosomabhizinisi bezikole eziphakeme lapho bengabelana khona nabo ngomkhakha we-ecommerce.
Abantu abaqapheli ukuthi kukhona amabhizinisi abonakalayo asebenzayo njengamanje lapho ibhizinisi lingawuphathi khona umkhiqizo. Kunezinkampani ezinjenge-IDS, ezilawula zonke izici zokuthola imikhiqizo kumakhasimende akho (futhi ibuye uma kunezimbuyiselo). Ukuthunyelwa kuvela ngqo kumenzi - kepha kugcinwe ngokwesifunda yi-IDS.
I-oda kusayithi lomthengisi liya ngqo esikhungweni sokugcwaliseka lapho lifakwe ngokucophelela futhi lithunyelwa kumakhasimende. Lokhu intuthuko emangalisayo kwezobuchwepheshe abathengisi abakhulu nabancane abasizakala ngabo.
Abathengisi abakhulu bangasebenzisa i-IDS ukukhulisa ukukhula noma ama-spikes wesizini ngokufunwa. Abathengisi abancane bangasebenzisa i-IDS kusuka ngaphambili kuya emuva kuyo yonke indawo yabo yokugcina impahla, ukusatshalaliswa, kanye nembuyiselo. Kusigaba ngasinye, ama-IDS akhiqiza ukubandakanyeka kwenkampani.
Ngenxa yendlela entsha yokuqamba nokuguquguquka kwabasebenzi nezinhlelo zayo, i-IDS ibingumqokelwa wemiklomelo eminyakeni embalwa emuva e-Indianapolis. Indawo emaphakathi ye-Indianapolis eMidwest, isimo sezulu esingaqagelwa, nezindleko eziphansi zokuphila kuyenza indawo ekahle yezikhungo zokugcwaliseka ezinjengalezi.
Njengabamakethi, kubalulekile ukuthi sazi ukuthi ibhizinisi liguqukile. Iqiniso lokuthi ungakwazi ukuklama i-spec ngamadijithi, ngabe lenziwe phesheya kwezilwandle, lilondolozwe phakathi nendawo, futhi lisabalaliswe ngaphandle kwenkampani yakho lapho liyithinta lihle kakhulu futhi livula iminyango eminingi yezobuchwepheshe obusha.
Tags: ama-idukugcwaliseka kwama-idIndianaindianapolislogisticsukubuyisela emuva izinto